Iintlobo ezahlukileyo Binary Iinketho – FX-Consultant
6. EyoMsintsi 2017 admin Blog
Enoba uyayikholelwa okanye akuyikholelwa kukho ngaphezulu enokunikwa yilenkqila iinketho yokubini nje i yemveli digital iinketho yokubini ukuba abarhwebi abaninzi basebenzisa ukwenza iingeniso. Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo ongazikhetha yokubini ezikhoyo ukwenzela urhwebo na ukunika nayiphi lwabaqalayo umrhwebi kunye nempahla ngakumbi ukuba bangasebenzisa ukuphuhlisa isicwangciso zabo zokushishina. Iindidi iinketho yokubini kunokukunceda ukuba izicwangciso ezisekelwe off yeemeko lentengiso kwaye sisebenzise iindlela kwimarike inzuzo. Nazi ezinye iintlobo eziphambili iinketho yokubini ukuba unako ukuqalisa urhwebo.
1. ongakhetha Digital
Le yeminye iinketho yokubini ixhaphakileyo ukuba abanokucinga ngayo. Ezi iinketho yedijithali zidla wasebenza nge amaqonga zorhwebo online kwaye kuvumela umrhwebi ukukhetha nokuba ukhetho phezulu okanye ezantsi esekelwe off ngeembono zabo ngendlela asset iza kuhamba kunye emarikeni. Isivumelwano ukhetho up apho umrhwebi eziva ngokungathi-asethi uya kuphelela inzuzo phezu lixesha xa kuthelekiswa ixabiso yamangenelo yesivumelwano. A ukhetho phantsi okanye ukhetho wabeka lisetyenziswa iinketho yedijithali xa umrhwebi ukholelwa ukuba i-asethi uya kuwa ngezantsi ixabiso layo entry-level ekupheleni kwekhontrakthi ukhetho. Ukusebenzisa ezi ntlobo iinketho yedijithali kunokuba ngokukhawuleza kakhulu kwaye kulula ngakumbi Programmes elifutshane elide. ongakhetha Digital kwenza kube lula ukulandela imisebenzi ezininzi ngexesha elinye nge kwiphepha portfolio akhawunti.
2. ongakhetha touch
Olu hlobo khetho yokubini kancinci eyahlukileyo ingcamango zethu zamandulo ongakhetha yokubini. Nge tai chi khetho evula umrhwebi unako ukwenza touch kabini, kuchukunyiswa kunye uthinte kwezivumelwano. Ngokwesiseko touch izivumelwano ziquka kwingqikelelo yokuba emarikeni ngokunjalo. A ukhetho touch uthatha ukuba ixabiso le-asethi izakufikelela inzuzo imajini kwangaphambili phambi komhla wokuphelelwa ukhetho kufikelelwe. Akukho iinketho touch bacinga ukuba inzuzo eludinini kwangaphambili kuya kufikelelwa kuso. bemchukumisa Double kwenzeka xa ixesha intlawulo echazwe ezifakwe iinketho isivumelwano nto leyo amathuba ezimbini inzuzo. Xa abarhwebi ziqala ukuba ulichule kakhulu intelekelelo kwaye uzive ingathi i-asethi ukufikelela kwinqanaba echazwe kwi kufutshane iinketho touch elizayo kunokuba iindlela kotaka yeenketho yokubini.
Ezi nje ezimbini iintlobo eziphambili iinketho yokubini ziyafumaneka izimali. Kunye nezinye iintlobo ezimbalwa ezikhoyo, Iinketho yokubini ukwazi ukunikela urhwebo elinemali kakhulu kubatyali ezinamava.
Next Post:guide umsebenzisi ukuba wabaqalayo ngorhwebo forex